हकिङ भन्छन् - 'मानव जाति अब ६ सय वर्षसम्म' ! जोगाउने कसरी ? - मूल्याङ्कन अनलाइन
तुल्सीदास महर्जन | February 8, 2018
वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले झण्डै एक वर्ष पहिलेदेखि लगातार पृथ्वी खतरामा रहेको र यसलाई जोगाउने उपाय पत्ता लगाउन आफ्नो सुझाव सहित सम्पूर्ण मानव जातिलाई अनुनय विनय गरिरहेका छन् । उनले पृथ्वी र यसभित्रका मानवलगायत सम्पूर्ण जीवनको नै अस्तित्वको खतरा प्राकृतिक कारणभन्दा पनि मानवीय क्रियाकलाप नै प्रमुख रहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
अत्यधिक तापमान वृद्धि हुँदा रातो हुनेगरी तातो ग्रहमा बदलिएको पृथ्वीको अलेक्सी ओडिन्टसोभले तयार पारेको काल्पनिक चित्र
“मौसम परिवर्तन अहिले हामीले सामना गरिरहेको मध्ये सबभन्दा भयानाक खतरा हो र अहिले नै हामी केही गर्छाैं भने मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ” हकिङ चिन्ता पोख्छन् ।
प्रश्न उठ्छ सम्पूर्ण पृथ्वी र जीवनलाई नै ध्वस्त पार्ने काम कसले गरिराखेको छ ? वैज्ञानिक हकिङले त अहिलेको लागि त्यस्तो विनाशका कारकमध्ये प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भएको संकेत गरेका छन् । तर, उनी त एक व्यक्ति न हुन् ।
प्रश्न उठ्छ सम्पूर्ण पृथ्वी र जीवनलाई नै ध्वस्त पार्ने काम कसले गरिराखेको छ ? वैज्ञानिक हकिङले त अहिलेको लागि त्यस्तो विनाशका कारकमध्ये प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भएको संकेत गरेका छन् । तर, उनी त एक व्यक्ति न हुन् । उनी एक्लै विनाशको कारण बन्न सक्लान् ?
निर्वाचनमा बिजय भनेको बहुमत पाएपछि हुने हो ? त्यसकारण ट्रम्पले गर्ने विनाशकारी कामको दोषी उनलाई मत नदिने अमेरिकी जनता पनि हुन्छन् ? अर्को, विकासको नाममा भू–तापमान बृद्धि गर्ने मानवीय क्रियाकलाप र युद्धमा श्रेष्ठता हासिल गर्न परमाणु बनाउने होड त ट्रम्पभन्दा धेरैअगाडि नै सुरु भएको हो नि ! दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति त्रुम्यानको आदेशमा अमेरिकी वायुसेनाले सन् १९४५ मा जापानका दुई ठूला शहरहरु हिरोशिमा र नागाशाकीमा परमाणु बमहरु खसालेर लाखौं निर्दोष जापानीहरुलाई एकै चिहान बनाएको हो नि ! यसका दोषी सम्पूर्ण अमेरिकी जनता हुन् ?
दोश्रो विश्वयुद्धमा हिटलरले ६० लाखभन्दा बढी यहुदीहरुलाई ग्याँस च्याम्बरमा राखी खरानी बनाए । त्यस युद्धमा कुल ३ करोड मानिसहरुले ज्यान गुमाएको आँकडा छ । दोश्रो विश्वयुद्ध मूलतः हिटलरको विश्व बिजय महत्वाकांक्षाबाट सुरु भएको हो । तर, उनलाई जर्मन चान्सलर त जर्मन जनताले गरेका हुन् नि ! के त्यो विनाशका दोषी जर्मन जनता हुन् ?
शान्ति नै मानव जाति, मानव समाज, सम्पूर्ण जीवन र यो सुन्दर पृथ्वीलाई जोगाउने अचुक उपाय हो । तर, बुद्धले सुझाएको निर्वाण प्राप्तिको मार्ग इतिहासमा न दास मालिकहरुले लिन सके, न सामन्त राजा महाराजाहरुले लिन सके, न त आधुनिक युगका हिटलर र बुसहरुले लिन सके ।
इसापूर्व ६ औं शताब्दीमा बुद्धले मानव समाजभित्रको दुःखको स्रोत मानिसमा भएका काम (यौन), क्रोध, माया, मोह, ईर्ष्या र घृणाको प्रवृत्ति देखे । उनले ‘यी प्रवृत्तिलाई वोध गरी न्यूनीकरण गर्ने उपायहरु छन्’ भने । उनको शिक्षा अनुसार त्याग त्यस उपायको सुरु पाइला हो । तैपनि ती प्रवृत्तिहरु मानिसभित्र अन्योन्याश्रित (inbuilt) हुने भएकोले दुःखबाट पूर्ण मुक्ति भनेको निर्वाण प्राप्त गरेपछि नै हुने उनले सुझाए । उनका अनुसार दुःख जन्माउने प्रवृत्तिहरु मानिसभित्र अन्योन्याश्रित हुने भएकोले पुनः नजन्मिने प्रक्रियामा जानु वा अभ्यास गर्नु (पूर्ण त्यागको अभ्यास) नै निर्वाण प्राप्तिको मार्ग हो । बुद्धले काम, क्रोध, माया, मोह, ईर्ष्या र घृणाको प्रवृत्तिले नै मानिसलाई ह्रिंशक बनाउँछन् । त्यसैले उनले निर्वाण प्राप्तिको मार्ग नै शान्तिको मार्ग हो भने । वर्तमानमा विश्वभरि नै बुद्धलाई शान्तिको प्रतिकका रुपमा मानिन्छ ।
मार्क्सवादले वर्गविहीन समाजमा जानका लागि पुँजीवादी समाजको अन्त्य भई वैज्ञानिक समाजवादी समाजको स्थापना हुनुपर्ने सिद्धान्त पेश गरे । तर, यो गर्न जनतालाई (समाज निर्माता श्रमिक वर्गलाई) पुँजीजीवि वर्गको कब्जामा रहेको राज्यसत्ताले दिँदैन । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादी समाज स्थापना गरी वर्गविहीन साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने र युद्धलाई सदाका लागि अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्न पुँजीवादी राज्यसत्तालाई क्रान्तिद्वारा फाल्नुको विकल्प नभएको मार्क्सवादले सुझाएको छ ।
तपाईंले मानव जातिलाई जोगाउन अर्को ग्रहमा जान वर्तमान र भविष्यका पुस्तालाई सुझाउनु भयो । तर के अर्को ग्रहमा जान सक्षम हुने अवस्थामा ट्रम्प जन्मिँदैन त ? अर्को ग्रहमा परमाणु बम बनाउँदैनन् ? हिटलरका सन्तानहरु अहिले युरोपमा सलबलाइरहेका छन् । के उनीहरु अर्को ग्रहमा जान सक्दैनन् ? विश्वमा युद्ध ल्याउने पुँजीजीबि वर्ग अर्को ग्रहमा जान सक्दैनन् ?
वर्तमान विश्वमा मार्क्सवाद सर्वत्र छ । समाजवादी क्रान्ति पनि सर्वत्र छ । तर, के हामी वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा छौं ? के हामी वर्गविहीन समाज निर्माणको प्रक्रियामा छौं ? के हामी स्थायी शान्ति निर्माणको मार्गमा छौं ? अहिले विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र गरी मानव समाजका लागि आविष्कार भएका जति पनि शास्त्रहरु छन् ती सबैको सरोकार यसैमा हुनु जरुरी भइसकेको छ । किनकि, यो पृथ्वी रहेमा हामी मानव रहने हो । अनि हामी मानव रहेमा हाम्रा शास्त्रहरु रहने हुन् । यो विश्व ब्रम्हाण्डको नियम अनुसार आइन्स्टाइनको भाषालाई प्रयोग गरी भन्ने हो भने एउटा निश्चित अन्तरिक्ष–समयमा यो पृथ्वी रहेको छ, रहनेछ । तर, अर्को कुनै अन्तरिक्ष–समयमा यसको भविष्यबारे हामीले अहिले नै केही भन्न सक्दैनौं । पृथ्वी त करोडौं र अरबौं वर्षसम्म पनि रहला । तर, यसको भविष्य हामी मानवकै कारणले अहिले नै समाप्त पो हुने होइन ? वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङको चिन्ता यसैमा रह्यो ।
तपाईंले मानव जातिलाई जोगाउन अर्को ग्रहमा जान वर्तमान र भविष्यका पुस्तालाई सुझाउनु भयो । ठीक छ, उहाँहरुले त्यस्तो प्रविधि पनि बनाउनु होला रे । के त्यस अवस्थामा ट्रम्प जन्मिँदैन त ? ट्रम्पलाई जिताउने जनता जन्मिँदैनन् ? तिनीहरुले अर्को ग्रहमा परमाणु बम बनाउँदैनन् ? हिटलरका सन्तानहरु अहिले युरोपमा सलबलाइरहेका छन् । के उनीहरु अर्को ग्रहमा जान सक्दैनन् ? ट्रम्प, हिटलर लगायत विश्वमा युद्ध ल्याउने पुँजीजीबि वर्ग अर्को ग्रहमा जान सक्दैनन् ? सक्छ र सक्छन् भने अर्को ग्रहमा पनि युद्ध त भइहाल्छ । यो पृथ्वी बस्न लायक भएन भनेर अर्को ग्रहमा पुगेका मानव जातिले त त्यो ग्रहलाई पनि ध्वस्त बनाउन सक्ने हुन्छ । यसको उत्तर हामीले कहाँबाट पाउने ?
अस्ति भर्खरकै कुरा हो, गत जनवरीमा इरानमा २-३ दिनमै मुलुकभरका सयौं शहरहरुमा युवाहरुले वर्तमान सरकारको जनतामारा नीतिबिरुद्ध स्वतस्फूर्त आन्दोलन चर्काए । इरानजस्तो कट्टर मुस्लिम देशमा ज्यानको बाजी राखी युवाहरु राज्यसत्ताबिरुद्ध २-३ दिनमै एकत्रित हुने स्थिति केले सम्भव तुल्यायो ? इन्स्टेग्रामले । हो, फेसबुकजस्तै श्रब्यदृश्यसहित सूचना आदानप्रदान गर्ने इन्स्टेग्रामले नै इरानभरका युवाहरुलाई सरकरको जनतामारा नीतिबिरुद्ध एकत्रित गरी आन्दोलनमा उतार्यो ।
महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले परमाणु ऊर्जाको सूत्र (E=mc2) बिसौं शताब्दीको सुरु शताब्दीमा आविष्कार गरे । तत्कालीन विश्व तानाशाह हिटलरले संसार ध्वस्त बनाउने खतरा बढेको कुरामा सहमत भई उनले त्यो सूत्र परमाणु अस्त्र बनाउन अमेरिकालाई सुम्पे । वैज्ञानिक ओपन हाइमरले सन् १९४५ सम्ममा परमाणु बम बनाएर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सुम्पे । आइन्स्टाइन र ओपनहाइमर दुबै ती परमाणु बमहरु मानव संहारका लागि प्रयोग गर्न नभई हिटलरलाई धम्क्याउनमा मात्र सिमित गर्ने पक्षमा रहेको पुष्टि पछि उनीहरु आफ्नो बाँकी पूरै जीवन काल परमाणु हतियार प्रयोगबिरुद्धको अभियानमा लागेर गरे । अमेरिकी पुँजीवादी साम्राज्यवादी राज्यसत्ताले युद्धमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नाममा लाखौं जापानीहरुलाई एक चिहान बनाउने गरी हिरोशिमा र नागाशाकीमा जुन परमाणु बम खसाले, त्यो घटनाले आइन्स्टाइन र ओपनहाइमर दुबैलाई गल्ती र पश्चाताप महसुस गरायो ।
नेपालमा वामगठबन्धनले विकास, समृद्धि र समाजवादको सपना बाँड्दैछ । वामगठबन्धन विश्व पुँजीवादको विकास र समृद्धिले विश्व समाज र यो समग्र पृथ्वी नै नष्ट हुने पर्यावरणीय विनाश एवं युद्ध निम्त्याइरहेको कुराप्रति कतिको सजग छ ? अमूर्त समाजवादले वैज्ञानिक समाजवादको स्थान लिन नसक्ने कुरामा कतिको प्रष्ट छ ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई अध्यक्ष भन्ने कुरामा नै अलमलिएको राजनीतिले विकास, समृद्धि र समाजवाद के हुन्, कसका लागि र कसरी भन्ने सवालको जवाफ दिन सक्छ ?
नेपालमा अहिले वामगठबन्धनको सरकार बन्दैछ । त्यसले विकास, समृद्धि र समाजवादको सपना बाँड्दैछ । वामगठबन्धन विश्व पुँजीवादको विकास र समृद्धिले विश्व समाज र यो समग्र पृथ्वी नै नष्ट हुने पर्यावरणीय विनाश एवं युद्ध निम्त्याइरहेको कुराप्रति कतिको सजग छ ? अमूर्त समाजवादले वैज्ञानिक समाजवादको स्थान लिन नसक्ने कुरामा कतिको प्रष्ट छ ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई अध्यक्ष भन्ने कुरामा नै अलमलिएको राजनीतिले विकास, समृद्धि र समाजवाद के हुन्, कसका लागि र कसरी भन्ने सवालको जवाफ दिन सक्छ ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थालाई अहिले उपयोग गर्नुको विकल्प त नहोला वर्तमान नेपाली राजनीतिमा, तर नयाँ पुस्ताले अब यो सबथोक भयो भनेर सोच्नु गल्ती हुन्छ ।
« राजधानीका सार्वजनिक यातायात – सेवाका नाममा व्यापार (Previous News)
(Next News) राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ९९.५२ प्रतिशत मतदान – आयोग »